Baahida ugu weyn, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Baahida ugu weyn ee aadamiga
“Bilowgii waxaa jiray Ereyga, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, Ereyguna wuxuu ahaa Ilaah ... waxaa ku jiray nolol, noloshuna waxay ahayd nuurka dadka. Oo nuurkuna wuxuu ku iftiimiyaa gudcurka, gudcurkauna ma aqbalin. "Yooxanaa 1, 1 - 4 (Zurich Bible)
Musharrax gaar ah oo ka tirsan xafiiska siyaasadeed ee Mareykanka wuxuu ka codsaday hay'ad xayeysiis inay u sameysato sawir isaga u gaar ah. Nashqadeeyaha xayeysiinta ayaa weydiiyey astaamahiisa uu jeclaan lahaa inuu xoogga saaro.
"Kaliya waa caadi," ayuu ku jawaabay musharraxa, "sirdoon sare, daacadnimo buuxda, daacadnimo guud, daacadnimo guud, iyo dabcan, is-hoosaysiinta."
Annaga oo adeegsaneyna warbaahinta maanta, waxaan ku kalsoonaan karnaa siyaasad kasta, si kasta oo uu u fiicanyahay ama ay u fiicnaan karto, in qalad kasta, khalad kasta, bayaan kasta oo aan saxsaneyn ama qiimeyn lagu sameyn doono goor dhow. Dhamaan musharixiinta, ha ahaato baarlamaanka ama bulshada maxalliga ah, waxaa loo soo bandhigayaa harraad xagga warbaahinta ah oo ah dareenka.
Dabcan, musharrixiintu waxay dareemayaan inay tahay inay sumcadooda geliyaan iftiinka ugu wanaagsan, haddii kale dadku kuma aamini karaan sinaba. In kasta oo ay ku kala duwan yihiin iyo in kasta oo ay jiraan awoodaha iyo daciifnimada shaqsiyadeed, haddana murashaxiinta dhammaantood waa bini-aadam nugul. Aynu wajahno, waxay jeclaan lahaayeen inay xalliyaan dhibaatooyinka waaweyn ee ummaddeenna iyo adduunkaba haysta, laakiin awood uma lahan inay wax yeeshaan. Kaliya waxay sameyn karaan intii karaankooda ah si ay waxyaabaha u xakameeyaan si macquul ah inta lagu gudajiro.
Dhibaatooyinka iyo xanuunnada bulshada aadanaha ayaa sii socda. Dembiyada, rabshadda, hunguriga, isdabamarinta, cadaalad darrada iyo dembiyada kale waxay ina tusayaan inay jirto meel mugdi u ah aadamiga. Xaqiiqdii, gudcurka mugdigu wuxuu ka yimid ka soociddii Ilaaha ina jecel. Waa musiibada ugu weyneyd ee ay dadku ku khasban yihiin inay u adkaystaan ​​waana waxa sababay xumaanta kale ee bini'aadamka. Intuu mugdiga ku jiro, baahi baa ka weynaatay dhammaan dadka kale - baahida loo qabo Ciise Masiix. Injiilku waa warka wanaagsan ee Ciise Masiix. Waxay noo sheegtay in iftiinka dunida yimid. Ciise wuxuu yidhi, Anigu waxaan ahay nuurka dunida. "Ku alla kii i raacaa gudcurka kuma socon doono, wuxuuse lahaan doonaa nuurka nolosha." (Yooxanaa 8:12) Ciise Masiix wuxuu dib u soo celiyaa xiriirkii aabe iyo sidaas oo bini-aadamka gudaha ayuu ka beddelaa.
Markii dadku isku halleeyaan isaga, nuurka ayaa bilaabanaya inuu dhalaalayo wax walbana waxay bilaabaan inay is beddelaan. Taasi waa bilowga nolosha dhabta ah, nolosha farxadda iyo nabad ku wada noolaanshaha Ilaah.
Aabbihii jannada, waxaad tahay iftiin mana jiraan wax mugdi ah oo kugu dhex jira. Waxaan kaa fiirinaa iftiinkaaga wax walba oo aan sameyno waxaanuna kaa codsaneynaa in iftiinkaaga noo iftiimiyo nolosheena si gudcurka dib ugu soo laabto, sida aan adiga kugula socono iftiinka. Waxaan u duceyneynaa magacaan Ciise, Aamiin